Taxanaha Daaqada Daawashada Biyaha ugu Fiican-Laab-soo-saaraha iyo Warshadda oo Si Buuxda u Furan | Dijing
Jawiga dhawaaqa ee guriga wuxuu si dhow ula xiriiraa raaxada nolosha. Waxaa jira hanjabaado sida duufaanno rabshado wata, cimilada iyo daxalka xeebta, sidaa darteed shuruudaha wax -qabadka daaqadda iyo dhinacyo kale ayaa aad u sarreeya. U dooro albaabkan iyo daaqad tayo sare leh nolosha aragtida badda ee deggan, oo si habsami leh u xalli dhammaan noocyada dhibaatooyinka nolosha ee aan la iska indho tiri karin, hal tallaabo. Nooca daaqadda furan ee la-laaban karo wuxuu si buuxda u furaa aragga aragga ee aan xayndaabka lahayn oo ballaadhan, wuxuu bixiyaa jawi furan, wuxuu kordhiyaa wareegga hawada, wuxuu fududeeyaa nalalka iyo hawo-qaadista, wuxuuna leeyahay aragti aan caadi ahayn oo leh aragtiyo aan horjoogsanayn.
Maaddada aluminium ee asalka ah ee la hagaajiyay waxay leedahay muuqaal iyo waxqabad labadaba, shaabadayn wanaagsan, dahaar dhawaaqa iyo yareynta buuqa, kuleylka kuleylka; xoog sare, ma laha isbeddel, cimri dheer oo adeegyo oo astaamo tayo sare leh leh; bay'ada u fiican, caafimaad leh, waarta oo deggan; hawo-mareenka wanaagsan, aan la taaban karin iyo dayactir la'aan. Muraayadda dahaarka leh ee laba-lakabka leh waxay abuurtaa guri ku habboon xasilloonida, si weyn bay u yaraysaa buuqa, waxay yaraysaa decibel-ka buuqa, waxayna leedahay saamayn ka-hortag kulayl oo aad u fiican, oo abuuraya jawi nololeed oo raaxo leh. Nidaamka dheecaanka ayaa si dhakhso ah u daadin doona biyaha ku urursan dariiqyada daaqadaha, taas oo ka hortagaysa in biyaha roobka haraaga ah ee saqafku ay soo galaan qolka, waxayna leeyihiin wax-qabad aad u fiican oo aan qoyaan lahayn
1. Qaab -dhismeedka aluminiumku wuxuu qaataa naqshad qaab dhismeed nidaamsan, qaab -dhismeedka riveting uma baahna alxanka, rakibidda iyo kala -soocidda ayaa ku habboon oo deg -deg ah, muuqaalku waa qurux, waana xoog iyo raag;
2. Xirfadda sare ee saqafyada gudaha iyo dibaddaba si loo abuuro daaqado waara oo raaxo leh;
3. 3D qaab-dhismeed saddex-cabbir ah oo ku jira daaqadda daaqaddeeda, qalab adag oo xoog leh oo lagu dhex dhisay dheecaan aan la arki karin, wax-soo-saarka biyaha weyn, ka-hortagga wax-ku-oolnimada;
4. Muraayadda daaqaddu waa hawl quful si otomaatig ah u shaqaysa, taas oo lagu furi karo hal taabasho iyo hal riixitaan, oo leh ilaalin dhow si loo yareeyo khataraha qarsoon
5. Qalab tayo sare leh ayaa riixaya oo jiidaya si habsami leh, dabacsan, oo waara;
6. Xirmada silikoonku waxay leedahay cidhiidh hawo aad u fiican iyo cidhiidhiga biyaha, oo si wax ku ool ah u go'doomisa buuqa, dabaysha iyo ilaalinta kulaylka;
7. Balakoonka waa la xiri karaa oo waa la furi karaa wakhti kasta, oo leh shahaado laaban oo weyn iyo raad yar, oo bixisa taageero xooggan oo lagu ballaarinayo goobta aragtida iyo hagaajinta meesha bannaan, isla markiiba bogsiisa niyadda xun.
Hore: Taxanaha Daaqada oo Furan Si Furan
Xiga: Albaabka Laaban
Taxanaha Daaqada oo Furan Si Furan
Taxanaha albaabka oo siibanaya oo culus-furan oo fidsan